जान्नुहोस ! भुइँकटहरका केही यस्ता फाइदा र बेफाइदाSamachar Pati
जान्नुहोस ! भुइँकटहरका केही यस्ता फाइदा र बेफाइदा
भुइँकटहर पोषक तत्वको भण्डार नै हो । यसमा ब्रोमिलेन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिनी र फाइबर पाइन्छ l भने भिटामिनमा ए, सी, बिटा क्यारोटिन, थियामिन, बी ५, बी ६ र फोलेट पाइन्छ । यस्तै, खनिज तत्वमा पोटासियम, कपर, म्यागनिज, क्याल्सियम, सोडियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ । यसमा कम क्यालोरी हुने हुनाले तौल घटाउन पनि उपयोगी मानिन्छ।
यस्ता लक्षण देखापर्छन भने, जान्नुहोस् तपाईलाई थाइराइड छ
नेपालमै पहिलोपटक आवाज प्रत्यारोपण सेवा सुरु
पाचन प्रणाली सुधार्ने आयुर्वेदिक तरिका